Guddoomiye Xaliimo yareey oo u jawaabtay Madasha Xisbiyada – Radio Baidoa
Guddoomiye Xaliimo yareey oo u jawaabtay Madasha Xisbiyada
Guddoomiyaha Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo yareey) ayaa ka jawaabtay eedeyn ay u soo jeediyeen qaar kamid ah Xisbiyada,kuwaas oo qaarkood ka dalbaday inay is casisho.
Guddoomiye Xaliimo yareey ayaa sheegtay in aysan aheyn Guddigooda dad dambiile ah oo qaban waayay Shaqadii loo diray,hayeeshee ay horay u soo gudbiyeen in baahi badan oo la xiriirta arrimo doorashada ay jirto.
Waxaa ay sheegtay in weli aan la helin waxyaabihiimii muhiimka u ahaa doorashada,sida Dhaqaalaha,hayeeshee Madasha Xisbiyada laga doonayay inay dhaqaalahaas la baadi goobaan,balse ay jawaab uga dhigeen is casil.
“Anaga waxaan is casileynaa hadii aan dambiile noqono oo haqadii naloo diray aan qaban weyno,feberaayo 2017 ayaan sheegnay in ay ka maqan yihiin waxyaabihii doorashada lagu qaban lahaa welina ma helin laakin in Guddiga la iska eedeeyo ma ahan ayay tiri” Guddoomiye Xaliimo Yareey.
Kulamo lagu xalinaayo dagaal Beeleedyo oo ka bilaawday Feer Feer